"Tungutun" (caviar): Izibuyekezo ikhasimende mayelana nekhwalithi yomkhiqizo. salmon Red caviar okusanhlamvu "Tungutun"
Caviar "Tungutun" iwumkhiqizo ezidumile isigaba ezifana emakethe Russian. Abaningi bakholelwa ukuthi lo mkhiqizo has isilinganiso elilungile "intengo-izinga". Ukuthunyelwa umkhiqizo Kwakuseshwa emikhawulweni yonke yakwa-Russia. Mhlawumbe hhayi umthengi enjalo, owake wezwa leli thole. Kuyi-Internet, ungakwazi namanje ukuhlangabezana kakade yaphela isenzo ku izaphulelo kuma ukudayiswa kwalo mkhiqizo ezitolo e Moscow, Perm, Ufa nakwamanye amadolobha.
Funda kabanzi mayelana ne caviar "Tungutun"
Salmon caviar "Tungutun" ezikhiqizwa JSC "North-East Co. Ltd.". Uma uhlu ithemba, yakhiwa umkhiqizo wona ngokuqondile salmon, usawoti, amafutha sunflower , uwoyela elinendawo kanye nezivimbelakuvunda: sorbic acid (E200), i-sodium benzoate (E211). Lesi sakamuva izithasiselo ezimbili ukuvimbela spoilage komkhiqizo, futhi, ngeshwa, awukwazi ukuphila ngaphandle kwazo. Ukusebenzisa kwabo e lokuhlala aphansi ezimweni eziningi akunamthelela nempilo yabantu, ngaphandle phambi yokungezwani komzimba ukuze izingxenye. Ukusetshenziswa kwedatha nezivimbelakuvunda evunyelwe umthetho we Russian Federation, lapho ngokucacile lelipelwe e izithasiselo MPC yalolu hlobo.
Caviar itholakala ezikhundleni ezehlukene. Imibandela isitoreji omude kunayo yonke (1 unyaka) siyithola ngokusebenzisa ikani ithini. Umkhiqizo, njengazo zonke imikhiqizo nezibiliboco, ahlanganiswe amaprotheni. Futhi iqukethe amafutha, lokuhlushwa okuyinto cishe izikhathi ezingu-2 amaprotheni kancane. Kubonakala ukuba uya kahle, kodwa izindaba zakamuva basikisela ngenye.
Izinkinga izinga caviar "Tungutun"
Ngaphambili, ngo-2013, umenzi waba nezinkinga ezithile nge Roskontrolem ngokuqondene ukuhlolwa omuhle ngoba methenamine - uvinjelwe uyalondoloza. Ngaphezu kwalokho, kwatholakala ngo umkhiqizo kokweqa microflora futhi ingeyona engokwemvelo ukunambitheka oxidized. Nokho, umenzi ophika Imiphumela yabonisa okungafanele izinga izimpahla "Tungutun". Caviar njengoba kushiwo JSC "North-East Co. Ltd.", ngakolunye uhlangothi, ukuhlangabezana nazo zonke izidingo imikhiqizo ukudla.
Yamadivayisi "Tungutun" caviar
Ngaleso sikhathi samanje, ekuqaleni kuka-2015, umkhiqizo butholakala iziphakamiso ku-inthanethi futhi eziningi ezinkulu. Nokho, ngo-March 2014 wabonisa Roskontrol ukudayiswa emthethweni ezitolo eMoscow, okusho nezibiliboco ngaleso sikhathi kwaba ngaphansi kokuvinjelwa. Manje ulwazi mayelana ezingacacile yayo semthethweni. Phezu ukuthola umkhiqizo ezifana phezu counter izwi lokugcina isezandleni umthengi. Emuva ngo-2012, i-Internet zingatholakala eziningi Izibuyekezo elihle ithole "Tungutun". Abanye abalandeli waphawula ukuthi imikhiqizo efanayo evela kwamanye abakhiqizi baba kakhulu sibi, kuyilapho amanani rose. Kwaphawuleka mkhuba jikelele hit ezinye izinhlobo ukuze bafakwe ohlwini lwezinhlangano Roskontrolya.
Kufanele uthenga caviar "Tungutun"
Umkhiqizo "Tungutun" - nezibiliboco, okuyinto efanelekayo kulabo abazama ukuhambisana nazo zonke izinto kancane ukuze ulondoloze impilo yabo. Ngokwesibonelo, ukudla ukudla okusheshayo futhi ephuza iziphuzo energy. Abantu abanjalo ingxenye encane amaqanda akuyona lwezinga eliphakeme kakhulu ngeke kukulimaze. Elinye iqembu labantu, iningi labo uthanda osezingeni eliphezulu kakhulu umkhiqizo, kunokuba ezingeni eliphansi amanani.
Izinkinga nesikhathi amazinga ukukhiqizwa Kutholakale eziningi Roskontrolem abakhiqizi caviar. Kuphela izinhlangano ezimbalwa ngokushesha ulivumile icala. It uhlala akucacile isigaba Salmon caviar "Tungutun". Uphenyo izinga umkhiqizo wakufaka, njengoba umthetho, ngezansi noma ezingeni isilinganiso. Uyokwanelisa isifiso sabo iningi abathengi, Yiqiniso, ukuthenga engabizi, kodwa ukuhlangana zonke izindinganiso imikhiqizo. Ngo-2007, kwakungekho izikhalazo mayelana nekhwalithi "Tungutun" umkhiqizo. Caviar, ukubuyekezwa okwakukhona ezingeni eliphezulu, wayephakathi brand ezinhlanu ethandwa esikhathini esiningi.
Uphenyo caviar "Tungutun"
Kuyi-Internet, iningi amazwana kubonisa ukuthi umkhiqizo kungaba ngcono. Nokho, kwabaningi kuba sobala ukuthi umuntu akufanele alindele izinga okusezingeni kwezimpahla ogama value ngayinye 140 g ruble 400. umkhiqizo kungokwalabo "Tungutun" Lesi sigaba. Caviar, okuyinto libuyekeza sihlaziya ngokuningiliziwe, yakhelwe abathengi nge iholo elincane, kodwa lokhu akusho ilungelo umkhiqizo yingozi kubantu. Abaningi "Tungutun" akakuthandanga kusukela yangaphandle. Abanye abasebenzisi ubike ukunambitheka yokufakelwa umkhiqizo. Izimpendulo ezinjalo ingatholakala 2014, lapho kwakukhona ulwazi mayelana nomkhiqizo singena black uhlu Roskontrolya.
amakhasimende Abaningi basho amazwi isimo sengqondo kokungathathi hlangothi uju. Kukhona futhi labo bathandile umkhiqizo "Tungutun". Caviar lizimelele ezingeni isilinganiso kusukela umbono abasebenzisi eziningi. Ngaphansi common okubuyayo ngokuphelele mayelana nomkhiqizo. Baveza ukuthi nezibiliboco anosawoti omningi, kodwa ubukeka kunalokho eyohlobo, ngaphandle amafilimu angaphandle kanye izingqimba.
Ukuvota ku lomkhiqizo
Okunye ukudla lwemibhalo, okuyinto ukwakheka kanye nezici zichazwe ngokuningiliziwe, kusinike ithuba uvotele izinga noma izici umkhiqizo ezigabeni eziningana. Salmon caviar "impendulo Tungutun 'izinga okuyinto ehluke kangaka, ngenkuthalo emelelwa kulawa masayithi. Abasebenzisi abaningi baye babika ezingeni lelisetulu yokuthengisa lomkhiqizo. Nokho, izinzuzo, ngokuvumelana iningi, kancane ngaphansi kwesilinganiso.
Indlela ukunquma ikhwalithi nonprofessional caviar
elementi EsiZulwini asinayo kwetafula samaholide zibomvu caviar. Uyokwanelisa isifiso sabo abalandeli abaningi ukufunda izizathu iso kungacacisa ukuthi izinga imikhiqizo plan onjalo, yebo. Indlela uzihlole, uma uhlangana esitolo umkhiqizo elinjalo impikiswano like "Tungutun"? Caviar, ukubuyekezwa zazo engabazekayo, nezinkinga yansukuzonke nge Roskontrolem ukhiqize isifiso ukuqonda ngokuningiliziwe ngale ndaba.
Ochwepheshe batusa benaka yokuthi embizeni ukuba ngomunye uhlobo caviar. Ngempela usayizi ezifanayo shape. Lokhu ipharamitha waphawula ngokunembile ngesikhathi umkhiqizo womshini caviar "Tungutun". Izimpendulo ngakho ayiqukethe Imininingwane mayelana nokwephulwa ezinjalo.
Roskontrol, kanye abanye abasebenzisi ziye zaphawula amanothi angaphandle ukunambitheka caviar. Film kumiswa umkhiqizo "Tungutun 'futhi wathola imvelaphi engaziwa. Caviar, ukubuyekezwa zazo ezibonisa ukuthi into esolisayo esinjalo ithole umuntu oyedwa, odinga isimo sengqondo Qaphela lapho ekhetha. On nemingcele ngenhla, kanye iphunga, amanzi amaningi Kunconywa ukuba funa uma uthenga ochwepheshe umkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuhlola ngale.
Iqembu lika tasters
izifundo ezithakazelisayo usebenzisa lemikhiqizo letehlukene nezibiliboco yayiqhutshwa tasters amateur wale mikhiqizo. Lesi sihloko zingase kube nentshisekelo kulandwe amaphisi amaningi kule isidlo. Kwavela ukuthi phezu 1 st indawo ukunambitheka emizweni tasters ukubeka "Tungutun". Caviar, ukubuyekezwa elalikade bakhomba okuthandwa angaphandle kanye iphunga, njengoba kuqhathaniswa nezinye brand Bekumnandzi! Kufanele kuqashelwe ukuthi ukuhlolwa izinga wambozwa amehlo. Kukhona badideke: singabonisa kanjani ukuchaza leli phuzu?
Ngakho, kuzithinta kokugcina ngamunye umthengi izintandokazi. Ube nezikhathi ezinzima nezimnandi of the brand-salmon caviar "Tungutun", izibuyekezo zamakhasimende, ezihlukahlukene ukuhlolwa abonisa ukuthi kubalulekile ukuba udabule ezahlukene imikhiqizo, ukhululeke ukucela isitifiketi izinga ezitolo. Ngithanda abakhiqizi wale mikhiqizo ababekucabanga kabanzi mayelana abathengi. Lutho esithé xaxa njengoba izinga umkhiqizo. Ngisho ongaswele abantu bafuna ukuba etotoswayo. Kunalokho, non-ukuhambisana GOST umkhiqizo ngisho umuntu ocebile angathathi imikhiqizo enjalo. Ochwepheshe bathi ukuphepha amathole akuxhomekile intengo, iningi izinga umkhiqizo kanye emabhokisini kanye kude zokuhamba. Into esemqoka - ukulandela imithetho lapho ukhetha umkhiqizo. Ngeshwa, endaweni esitsheni avaliwe akunakwenzeka ukuqinisekisa lutho, it is kulokhu kufanele aqondiswe izimpendulo zokukhiqiza. Caviar "Izibuyekezo Tungutun 'ngakho futhi umbono ochwepheshe ebonisa ukuthi, kuleliphuzu impikiswano ngomkhiqizo izinga.
Ukudla Kosher. Kuyini lokhu umqondo?
Yini baseMelika ukudle njengesidlo sasekuseni, ukudla kwasemini kanye dinner
Semi-siphelile izinhlanzi: izinhlobo kanye nokusungulwa. Isitoreji imikhiqizo Semi-siphelile kusuka inhlanzi
Onikezwe futhi lapho ukudla ubhanana? Izinzuzo kanye umonakalo umkhiqizo
Kungani isoseji zobudokotela ngokuthi "zobudokotela": izici, ukwakheka Managing
Strategic Planning Izigaba
Indlela ulayishe "Maynkraft" kukhompyutha?
Folk nezimfumbe izingane. Russian Folk nezimfumbe
Izidakamizwa 'Nemozol'. Yokusetshenziswa zomuthi
Kulik (inyoni): incazelo, ukukhahlamezeka kwendawo, ukudla
Ubulili imiklamo. Ukukhuthazwa phuzu G.
Indlela yokwenza izithunzi? Izifundo zokwenza iziqalo
Indlela lizalele izibungu ukudoba noma isiyengo, okuzokwenza njalo eziningi
Bus izinkambo lonke elaseYurophu. Izibuyekezo mayelana uhambo
CSS: indlela kabusha izilungiselelo umdlalo
Inyama, ephekwe eziko